Nooca Ganacsiga S-Corporation
Hay'ada S waa qaab qaab dhismeedka ganacsiga sidaa awgeed loo magacaabay maxaa yeelay waxaa loo qaabeeyey qaab uu la kulmayo, wuxuuna hoos imaanayaa muuqaalka, ee IRS Revenue Code subchapter S. Siyaabo badan, aad ayuu u eg yahay shirkad dhaqameed, laakiin leh sifooyin shuraako la mid ah oo ka faa'iideysan kara noocyo ka mid ah ururada ganacsiga. Faa'iidada ugu weyn ee loola dhaqmayo sida cutubka S Corporation waa kan canshuurta laga gudbo. Canshuuraha laga gudbayo waxaa la helaa marka saamiyaasha lagu canshuuro heer shaqsi ahaan, sida iskaashi, halkii markii hore laga dhigi lahaa heerka shirkadda, ka dibna mar labaad heerka shakhsiga. Tani waxay siineysaa saamileyda sida ugufiican ee labada adduun waqtiyo badan - faa iidada canshuuraha ee iskaashi fudud, iyo masuuliyada xaddidan iyo ilaalinta hantida ee ay shirkad awood u leedahay.
Hay'ad caadi ah (ama "C") waa laga canshuuraa dakhligeeda shirkad ahaan, markaa saami kasta oo loo qaybiyo saamileyda shakhsiyadeed mar labaad ayaa laga canshuuraa sicirka shaqsiga (qiyaastii 15% canshuurta Federaalka). Tan waxaa loo yaqaan labalaabashada canshuuraha waana mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn jiritaanka Shirkadda S.
Shirkadda S, dhanka kale, looma canshuuro heerka shirkadda. Taabadalkeed, waxaa lagu canshuuraa iyada oo ku saleysan u qeybinta saamilayda saamiyada marba marka la joogo saamiga saamiyada. Hal shay oo maskaxda lagu hayo ayaa ah in cashuurtan ay dhacdo haddii ay jirto saami dhab ah oo saami loogu qeybsado saamileyda. Tani waxay ka dhigan tahay in daqliga kaliya la canshuuro hal mar, isagoo qaybinta u ah saamileyda.
Qaabkan cashuur-dhaafka ah wuxuu noqon karaa mid buuq iyo buuq labadaba. Tusaale ahaan, aynu soo qaadanno shirkad khayaali ah oo la yiraahdo Wallaby, Inc. Waxaan dhihi karnaa waxaa jira seddex la-hawlgalayaal ah, John, Jack, iyo Jacob, oo John uu leeyahay 50%, Jack wuxuu leeyahay 25%, iyo Yacquub haray 25%. Wallaby, Inc. ayaa kasbatay $ 10 milyan sanadkii la soo dhaafay dakhliga saafiga ah. Waqtiga canshuurta, John waa inuu sheeganayaa $ 5 milyan, Jack $ 2.5 milyan, iyo Yacquub inta hartay $ 2.5 milyan. Haddii John, isaga oo ah milkiilaha aqlabiyadda, uu go'aansado in uusan u qeybin macaashka saafiga ah ee saafiga ah, John, Jack iyo Yacquub ayaa wali mas'uul ka noqon doona canshuuraha dakhliga soo gala sida haddii qeybintaas loo sameeyay qaabkan, in kastoo seddexdii midkood uusan helin wax dhab ah. qaybinta lacagta. Xaaladdaan waxaa lagu maareeyn karaa waxa loogu yeero "isu-riix ciyaar" by weheliye aqlabiyad ah (ama wada-hawlgaleyaasha isku dhaca) iskuday lagu doonayo inuu ku tuuro qof laga tiro badan yahay ama lammaane aan jeclayn.
Shirkad-dhaqameedka, in kasta oo ay jirto canshuurta shirkadaha bilowga ah, ma jiro canshuur-qeybin heer-wadaag ee shakhsiyaadka haddii aan si rasmi ah loo qaybin.
Xaddidid kale oo ku saabsan shirkadda 'S Corporation' waa xaqiiqada ah in tirada saamilaydu ay ku xaddidan tahay 100, haddii ay jirto hal saamile oo keliya, waxaa jira khatar weligeed jirta oo ay IRS tixgelinayso xaaladda cutubka S oo ay ula dhaqmeyso shirkadda inay tahay shirkad heer caadi ah. ujeedooyin cashuureed. Tani waxay u badan tahay kiiska marka ay jiraan nooc kasta oo ka weecasho qaab dhismeedka shirkadda.
Qaabka S Corporation
Samaynta urur ahaan sida shirkad S sidoo kale macnaheedu waa, sida sida shirkadaha caadiga ah, waa in la dhowro qaab dhismeedka shirkadeed. Qawaaniinta shirkadu waa talaabooyinka ay tahay inuu sameeyo agaasime shirkadeed, sarkaal, ama saamileysi si loo joogteeyo ilaalinta awooda ay sameysay shirkada. Kuwani waa habraacyo lama huraan ah oo u adeegaya inay ilaaliyaan hantida shakhsiyadeed ee agaasimayaasha, saraakiisha, iyo saamilayaasha.
Qaababka ayaa loo soo koobi karaa sida soo socota:
Miisaaniyadaha shirkaduhu waa inay ahaadaan kuwo gooni ah oo laga soocaa Maalgelinnada Shakhsiyeed.
Waa inuu jiraa Shirar Sannadle ah oo ka mid ah Guddiga Agaasimayaasha.
Waa inuu jiraa Daqiiqado Shirkadeed iyo sarkaal loo xilsaaray inuu xanaaneeyo daqiiqadaha.
Dhammaan hawlgallada shirkadda, qandaraasyada, iyo lahaanshaha istiraatiijiyadeed waa inay kujiraan foom qoraal ah.
Dood-qoto dheer oo qoto-dheer iyo sharraxaadda qaab-dhismeedka shirkadeed ayaa laga heli karaa qaybtayada oo ay ka kooban tahay a Liiska Liistada Hubinta Shirkadaha. Intaa waxaa sii dheer, waxay xusayaan in u hogaansanaanta shuruucda shirkaddu ay shardi u tahay ku guuleysiga howsha shirkadda. Qaab dhismeedyadaani waxay u adeegayaan si loo ilaaliyo xaddidnaanta xaddidan iyo dheefaha canshuurta ee laga helo heerka shirkadda.
Xereynta Subchapter S Daaweynta
Tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah helitaanka xaaladda shirkadda S ma aha mid aad u murugsan, laakiin waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah loo yeesho iyaga si loo hubiyo in xaaladdu hor istaagto kormeerka iyo faa'iidooyinka maqaalka.
Si loo bilaabo, saamilelaha (yaasha) shirkada jira, ama milkiilaha shirkad cusub, waa inay fuliyaan IRS Foomka 2553, oo ay weheliso dukumiinti kasta oo maxalli ah haddii gobolka uu deggan yahay ee shirkaddu aqoonsato shirkadaha S (gobollada qaar waxay ula dhaqmaan dhammaan shirkadaha) isku mid, iyo qaar kale ayaa u oggolaanaya magacaabista S oo raacaya istiraatiijiyadaha canshuuraha ee la midka ah). Fulinta iyo xaraynta doorashadani waa inay dhacdaa kahor maalinta 16 bisha seddexaad ee soo socota xiritaanka sanad cashuureedka shirkada si loogu tixgeliyo heerka S inta lagu jiro sanad cashuureedka. Shirkadu waa inay la kulanto shuruudaha S Corporation inta lagu xusayay bilaha 2.5, iyo dhamaan saamileyda waa inay ogolaadaan xaalada, iyadoon loo eegeyn inay leeyihiin ama ha lahaadeene waqtiga isbedelka heerka.
Dib Ulaabashada Xaaladda S Doorashada
Xaaladda Shirkadda S22 waa lagala wareegi karaa si ikhtiyaari ah iyadoo la xareyn karo faylka warbixinta habboon ee joojinta. Kala noqoshada noocaan ah waxaa lagu sameyn karaa oo keliya oggolaanshaha iyo oggolaanshaha saamileyda inta badan. Habka dhameystiran, iyo dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay macluumaadka taageerada, waxaa laga heli karaa qaybta Xeerarka IRS ee 1.1362-6 (a) (3) iyo Tilmaamaha loogu talagalay Foomka IRS ee 1120S, Canshuur celinta Dakhliga Mareykanka ee Hay'adda S.
Kala noqosho ku lug leh ama laga joojiyo xaaladdu waxay dhici kartaa waqti kasta wakaaladaha sharci dejinta, sida IRS ama Guddiga Canshuuraha ee Gobolka, waxay ku dhawaaqaan ku xadgudubka shuruudaha u-qalmitaanka, ama si weyn u weyn, wixii ku guul-darreysto in la dhawro qaab-dhismeedka shirkadeed ee su'aasha keenaya hay'ad sharci oo gaar ah oo shirkadeed.
Kumaa u abaabulaya sidii Hay'ad S ah?
Shuraakada, kooxaha maalgashadayaasha, ama xitaa saamilayda shirkada ee hada raadinaya labada faa iidadood ee ku raaxaysashada qaan sheegashada xadidan iyo canshuur dhaafida waa in si dhab ah looga fiirsado heerka S Corporation, waa haddii shuruucda u qalmana la fulin karo lana waari karo. Faa'iidooyin badan ayaa laga helaa in laga soo xulo qaabkan hay'addan, in kasta oo kani yahay go'aan la doonayo in lagu gaadho iyada oo la kaashanayo khabiir ku xeel dheer arrimaha shirkadaha waaweyn ee S.
Hay'ad S ah (oo loo yaqaan sidan maxaa yeelay waa urur buuxiyay shuruudaha IRS ee ah in lagu canshuuro hoos imaad hoosaadka S ee Xeerka Dakhliga Gudaha) waa shirkad loo soo xushay doorashada cashuurta hoosaadka ee loo yaqaan 'Subchapter S cash cashuurta' oo loo sameeyay si loogula dhaqmo sidii pass. Qeybta guud ee loogu talagalay ujeedooyinka canshuurta, sida lammaanaha oo dakhligooda ama khasaarahooda ay "dhex maraan" canshuurta shaqsiyaadka saamileyda ah (iyadoo loo eegayo maalgalintooda ama lahaanshahooda shirkadda), iyadoo weli la siinayo ilaalin isku mid ah hantida iyo deyn ahaan shirkad dhaqameed. Saamilayaashu waxay bixin doonaan cashuurta dakhliga shaqsiyeed iyada oo ku saleysan dakhliga shirkadda S, iyadoon loo eegeynin in daqliga si dhab ah loo qeybiyay iyo in kale, laakiin waxay ka fogaan doonaan "canshuurta labalaab" ee ay la mid tahay shirkadaha caadiga ah (ama "C" corporate corporate).
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Hay'ad dhaqameed iyo Hay'ad S ah
Sababtoo ah qaab dhismeedka canshuuraha ee ay “gudubto”, shirkadda S ma hoos tagto canshuuraha heerka shirkadaha, sidaa darteedna waxay iska ilaalisaa cawaaqibka “labalaabashada canshuuraha” (heer ama shirkad dhaqameed, dakhliga ganacsiga waxaa marka hore lagu canshuuraa heerka shirkadda) , ka dib qaybinta dakhliga hadhaaga saamiyada shaqsiyadeed waxaa mar labaad loo canshuuraa sidii “dakhli” shaqsi) oo ku dhacay shirkadaha C.
Si ka duwan saami qaybsiga shirkadda ee lagu canshuuro heerka federaalka ee '15.00%', saami qaybsiga S (ama si sax ah cinwaan looga dhigo "Qaybinta") waxaa lagu canshuuraa saamiga canshuurta saamileyda. Si kastaba ha noqotee, saami qaybsiga shirkadda waxaa ku waajib ah laba jibbaarista kor ku xusan. Dakhliga waxaa marka hore lagu canshuuraa heerka shirkada ka hor inta aan loo qaybin saami ahaan ka dibna loo canshuuraa sidii daqli ahaan marka la siiyo saamileyda shaqsiyadeed
Tusaale ahaan, Cogs Inc, waxaa loo sameeyay shirkad S ah, waxay sameysaa $ 20 milyan dakhliga soo gala waxaana iska leh 51% waxaa leh Jack iyo 49% by Tom. Markay tahay cashuur celinta shaqsiyeed Jack, wuxuu soo sheegi doonaa $ 10.2 milyan dakhliga soo gala iyo Tom wuxuu soo sheegi doonaa $ 9.8 milyan. Haddii Jack (sida milkiilihii ugu badnaa) uu go'aansado inuusan u qeybin macaashka saafiga ah ee saafiga ah, labada Jack iyo Tom waxay wali mas'uul ka noqon doonaan canshuuraha dakhliga soo gala sida haddii qeybinta loo sameeyay qaabkan, in kasta oo aan midkoodna helin wax qaybinta lacagta ah. Tani waa tusaale shirkadeed "tuujin-ciyaar" oo loo isticmaali karo isku day lagu doonayo in lagu khasbo lammaanaha laga tirada badan yahay.
Yoolalka Ganacsiga ee Shirkadda S
Lahaanshaha xaaladda shirkadeed waxay leedahay dhowr faa'iidooyin la taaban karo oo shirkadeed ah. Marka ugu horreysa, dabcan, waa yoolka ah in la gaaro deyn xaddidan, ama yareynta saameynta sharciga shaqsiga ku habboon, ama qaabab kale oo deyn ah oo ay ku leeyihiin saamileyaasha shaqsiyeed, kana soo horjeedo saamileyaasha, iyo kahortagga saameynta shirkadda guud ahaan, ama inta harsan saamileyda shaqsi ahaan. Faa'iidooyinka ilaalinta hantidan ayaa run ah labada shirkadood ee caadiga ah iyo shirkadda S. Si gaar ah oo qaas u ah xulashada shirkada 'S' waa macaashka canshuuraha ee laga gudbo. In kasta oo ay jiraan xaddidyo ku saabsan xaddiga saamileyda ay shirkaddu lahaan karto si ay u buuxiso shuruudaha IRS ee xaaladda shirkadda, inta badan shirkadaha ku habboon heerka ugu hooseeya (kiisaska intooda badan, aan ka badnayn saamiyada 75 illaa 100 saamileyaasha) la doorto inay noqdaan. loo cashuuray sida shirkad S maxaa yeelay waxay u saamaxaysaa saamileyda shakhsiyaadka ah inay kasbadaan qayb weyn oo ka mid ah dakhliga ganacsiga. Shirkaddu waxay si toos ah ugu gudbi kartaa dakhliga saamileyaasha waxayna ka fogaan kartaa canshuur kordhinta la jaan qaada saamiga shirkadaha dowladda, iyadoo ay wali ku raaxeysanayaan faa'iidooyinka qaab dhismeedka shirkadda.
Xulashada S Corporation Xaaladda
Xulashada heerka shirkadeed waxay leedahay saameyn canshuur ah. Xaaladda S waxay u oggolaaneysaa saamilaydu inay ku dabaqaan faa'iidooyinka shirkadda iyo khasaaraha canshuur celinta shaqsiga. Si loo doorto xaaladda S, qofku waa inuu marka hore ku darsadaa sidii shirkad C guud ahaan ka dibna xereysaa IRS form 2553. Haddii aad dhowaan iskuxirtay, shirkaddaadu waxay fayl garaysan kartaa heerka S wakhti kasta inta lagu jiro sannadka canshuurta gudaheeda 75 maalmood ee taariikhda ku-biiritaankaaga. Haddii kale, ficilkan waa in la qaadaa bisha Maarso 15 haddii shirkaddu ay tahay sanad-bixiye canshuur-bixiye sanadle ah, si doorashadu u dhaqan gasho sannad cashuureedka hadda jira. Shirkad ayaa laga yaabaa inay hadhow go’aansato inay doorato heerka shirkadda, laakiin goaankan ma dhaqan geli doono illaa sanadka soo socda.
Digniinta Dakhliga Dadweynaha
Dakhliga aan rasmiga ahayn waa dakhli kasta oo laga helo maalgelin; tusaale ahaan saamiyada, dammaanadaha, maalgashiga nooca sinnaanta, hantida maguurtada ah, iwm. Dakhliga firfircoon waxaa ka dhashay adeegyada la bixiyay, alaabada la iibiyay, iwm. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in dakhligaaga aan rasmiga ahayn ee shirkadda S uusan ka badneyn 25% ee rasiidhada guud ee shirkadda. muddo saddex sano oo isku xigta; haddii kale shirkaddaada waxay qatar ugu jirtaa in IRS-ta ay ka noqoto. Xulasho fiican haddii ganacsigaaga la filayo inuu lahaado dakhli lama huraan ah wuxuu noqon karaa LLC.
U qalmidda Xaaladda S Corporation
Si loogu qalmo heerka shirkadda shirkadda S waa in la buuxiyaa tillaabooyin dhawr ah oo looga baahan yahay. 1. Shirkadu waa in loo aasaaso guud ahaan, shirkad faaiido C ah. 2. Hubso in shirkaddaada kaliya ay soo saartay hal nooc oo saami ah. 3. Dhammaan saamilaydu waa Muwaadiniin Mareykan ah ama Deganeyaal Joogta ah. 4. Ma jiri karaan wax ka badan saamiyada 75. 5. Heerka dakhliga guud ee shirkaddaadu kama gudbi doono 25% ee xaddiga rasiidhada guud. 6. Haddii shirkaddaadu leedahay taariikh-sannadeed dhammaad canshuur oo aan ka ahayn Diseembar 31, waa inaad fayl ka codsataa IRS. Haddii shirkaddaadu ay la kulantay dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, waxaad fayl garayn kartaa foomka '2553' IRS si aad u dooratid xaaladda S.
Shirkad Shisheeye Xadidan ayaa la iska yeelan karaa (lahaan karaan “xubno”) shirkadaha, shirkadaha kale ee LLC, iskaashatada, kalsoonida iyo muwaadin aan Mareykan ahayn, shisheeyaha aan deganeyn. Shirkadda S, dhinaca kale, waxaa lahaan kara oo keliya muwaadiniin Mareykan ah ama shisheeye rasmi ah. LLC wuxuu bixin karaa heerar / fasallo kala duwan oo xubinnimada ah halka shirkad S laga yaabo inay bixiso hal nooc oo kayd ah. LLC wuxuu lahaan karaa tiro kastoo xubno ah laakiin shirkad S ah ayaa ku kooban ugu badnaan saamiyada 75 illaa saamiyada 100 (waxay kuxirantahay qawaaniinta gobolka ay u samaysan tahay). Markii saamile ka mid ah shirkad S uu ka dacwoodo dacwad shaqsiyeed (ee aan ahayn ganacsi), saamiyada saamiyada waa hanti la wareegi karo. Markii xubin ka mid ah LLC lagu maxkamadeeyo dacwad shaqsiyeed (maahan ganacsi), waxaa jira qodobo ka difaacaya saamiga xubinimada in laga qaado shaqsiga.
Arimaha sharci ee la doonayo in looga fiirsado shirkada 'S'
Si loo hubiyo, waxaa jira talaabooyin sharci oo gaar ah iyo shuruudo u baahan in la buuxiyo ka hor inta aan shirkada loola dhaqmin sidii hay'ad S ah. Marka hore, saamilayda shirkad jira (ama aasaasaha shirkad cusub) waa inay sameyaan doorasho ay ku noqonayaan shirkad S ah oo ku saabsan Foomka IRS ee 2553 (iyo foomka u dhigma ee gobolka ay shirkaddu ku jirto) ka hor maalinta 16. bisha seddexaad ee soo socota xiritaanka sanad cashuureedka shirkada C hadii doorashada ay noqonayso mid dhaqan gal ah sanadka canshuurta hada jira. Hay'ada C waa inay uqalma sidii shirkad uqalma inta lagu guda jiro bilaha 2 1 / 2 iyo dhamaan saamileyda mudadaas bilaha 2 1 / 2 waa iney ogolaadaan, xitaa hadii aysan laheyn saamiyada waqtiga doorashada. Haddii doorashada la xereeyo ka dib maalinta 15 ee bisha saddexaad ee sannadka cashuurta, doorashadu waxay dhaqangelaysaa sanadka cashuurta ee soo socota iyo dhammaan saamileyda waqtiga doorashadu waa inay oggolaadaan.
Joojinta Xaaladda S Corporation
Joojinta ikhtiyaariga ah ee doorashada S waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu xereynayaa bayaan Xarunta Adeegga halka doorashadii asalka ahayd si sax ah loogu xareeyay. Kala noqoshada waxaa lagu sameyn karaa oo keliya ogolaanshaha saamileyda oo, waqtiga kala-noqoshada la sameeyo, qabta inka badan kala bar tirada la soo saaray iyo saamiyada aadka u sarreeya (oo ay ku jiraan saamiyada aan la qorin) ee shirkadda. Waxaa jira macluumaad gaar ah oo ay tahay in lagu daro qoraalka warbixintana waxaa lagu qeexay qaybta Xeerarka 1.1362-6 (a) (3) iyo Tilmaamaha loogu talagalay Foomka IRS ee 1120S, Canshuur celinta Dakhliga Mareykanka ee Hay'adda S.
Kala noqoshada ayaa laga yaabaa inay sheegto taariikh dhaqan gal ah illaa iyo inta ay tahey ama ka dib taariikhda dib u noqoshada la xareeyay. Haddii aan taariikh loo cayimin oo ka noqoshada la xareeyay ka hor maalinta 15 ee bisha saddexaad ee sannadka canshuurta, kala noqoshadu waxay dhaqangelaysaa sannadka canshuurta hadda jirta. Haddii kala noqoshada la xereeyo ka dib maalinta 15 ee bisha saddexaad ee sanadka canshuurta, kala noqoshadu waxay dhaqangeleysaa sanadka canshuurta ee soo socota.
Miyaan U Hagaajiyaa Shirkadeyda Sidii S Shirkad Ahaan?
Haddii aad damacsan tahay in shirkaddaadu yeelato wax ka badan saamiyaal (laakiin ka yar xadka gobolkaaga shaqsiga ah) oo aad uga faa'iidaysan karto faa'iidooyinka canshuur-dhaafka iyadoo isla markaasna aad fahanto caqabadaha ka hor imaan kara "canshuurta aan loo eegin qaybinta, ”oo aad la kulanto shuruudaha sharciga ah ee kor lagu soo sheegay, markaa shirkadda S wax weyn ayey ka tari kartaa inay ganacsigaaga ka dhigto mid faa'iido leh oo soo jiidata maalgashadayaasha saxda ah.
Isbarbar dhigga Noocyada Ganacsiga
Sida Loo Wada Shaqeeyo
Ku biir California
Ku biir Khadka Tooska ah
Shirkadda Xannaanada Leh ee Xaddidan (LLC)
Sida loo Bilaabmo Hay'ad samafal / Shirkad - Qeexid & Tusaalooyin
Faa'iidooyinka Ganacsiga Nevada
Shirkad Xirfad Leh
Karti u-yeelashada Sole
Waa maxay isku-darka?
Goorma La Bixi Doonaa
Xagee La Bixin Lahaa
Ma Inaan Ka Qayb Galaa?